Fampitandremana ny mpaminany sandoka | Apg29
Fampitandremana ny mpaminany sandoka
Tandremo dalàna iray tam-po avy amin'ny olona, ​​izy ireo dia sandoka sy faminaniana sandoka.
Mitandrema, iray tam-po mahafinaritra. Mpaminany sandoka sy ny mpitory dia na aiza na aiza ao amin'ny Facebook, ary amin'ny paroasy sasany. Very ny tenany izy ireo, ary mino fa marina izy ireo. Amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna mandà ny fanomboana an'i Jesosy, nefa tsy nahalala izany.
Fampitandremana aminareo milaza fa mpaminany Hianao, mpitory na ny mpitandrina. Ianao mamitaka ny olona hiaina ambanin'ny lalàna. Ianao hanaitaitra azy amin'ny faminaniana lainga sy ny toriteny. Te hanana fahefana amboniny mamitaka, ary milaza fa ny lalàna ampiharina.
Izany no fampitandremana ho anao. Manantena aho fa ho tafaverina avy amin'ny fitokoana, ary hanaiky an'i Jesosy - raha tsy izany dia haneho hoe iza ianareo!
Fantatro ianao ka mahafantatra izay vokatra lo no mitondra. Ianao enina dimy ny mpaminany sandoka, mpitory sy pasitera.
Tandremo mpiray tam-po
Koa tandremo, fandrao azon'ny mpiray tam-po ny dalàna ny olona, ​​dia sandoka sy faminaniana sandoka.
Faminaniana rehetra sy nitory fa tokony hitandrina ny lalàna ao amin'ny Testamenta Taloha dia nivadi-pinoana sy ny diso.
Ny fahafolon-karena avy amin'ny lainga.
Ary hitandrina ny Sabata, ary aza mihinana henan-kisoa, sns, dia diso sy lainga. Tsy nivadi-pinoana, ary tsy ara-baiboly.
Ary ianareo izay nitory any am-piangonana fa ny fahantrana sy ny aretina dia ozona - dia lainga sy nanohitra ny eglizy. Aiza ao amin'ny Baiboly no lazainy?
Ary naminany anareo toy ny andro vitsivitsy lasa izay, rehefa nitondra fiara handeha fiara, ny fahafolo teny, izay manao izany ao amin'ny Testamenta Vaovao?
Ary tianao fandraisana anjara sy milaza fa misy 164 ny lalàna foana, inona no holazaina? Ankoatry ny 613 izay ao amin'ny lalàna? Sa tokony hifidy 164 amin'ny 613 sy mihazona azy? Izany no diso sy ny lainga.
Ny anaranao no hiseho
Tamin'ny 2020, ny anaranao ho ambonin'ny rehetra izany, raha manohy amin'ny nanohitra ny eglizy.
Ary mieritreritra izay tianao momba ahy - Tiako ianao, nefa tsy toy ny rehefa mitory diso sy mamitaka ny olona izay tsy salama sy marary, sy ny maro hafa.
Ary mitandrema, iray tam-po mahafinaritra. Mpaminany sandoka sy ny mpitory dia na aiza na aiza ao amin'ny Facebook, ary amin'ny paroasy sasany. Very ny tenany izy ireo, ary mino fa marina izy ireo. Amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna mandà ny fanomboana an'i Jesosy, nefa tsy nahalala izany.
Ireto misy andininy ny lalàna ho an 'ireo izay efa voafitaky ny mpitory diso, sns, izay mino fa ny fahafolonkarena dia mihatra, na ny Sabata, tsy mihinana henan-kisoa sy ny toy izany.
Andriamanitra anie hitahy anao. Mivavaha ary aoka ny Fanahy Masina Guide Dej mba hahatakatra ny fahamarinana 'i Jesoa Kristy ny anaran'i NASA, amena.
Fa Andriamanitra, Izay manan-karena amin'ny famindram-po, tia antsika amin'ny be fitiavana, na dia fony mbola maty noho ny fahadisoana isika, nataony isika sy ho velona niaraka tamin'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fahasoavana no namonjena anareo. Eny, efa natsangany isika ka niara ary nanao antsika hiara-hipetraka any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, fa amin 'ny fotoan mba hampiseho ny be haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra dia, tsy noho ny asa, fandrao hisy hirehareha. Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.
Izany no nitranga rehefa tonga teo am-nofo nanaisotra ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didy sy ny lalàny ny roa ao amin'ny tenany olom-baovao iray, ka mamorona fihavanana. "
Ef 2: 4-10, 15 SFB98
"Ao aminy sy amin'ny alalan'ny finoana Azy isika, dia afaka matoky sahy sy hijoro eo anoloan 'Andriamanitra." Efesiana 3:12 SFB98
Alohan'ny tonga ny finoana izahay tao am-ponja foana ary niambina ny lalàna mandra-finoana dia haseho. Ny lalàna dia mpitaiza antsika ho amin'i Kristy, mba hohamarinina amin'ny finoana. "
Galatiana 3: 23-24 SFB98
Tsy amin'ny alalan'ny lalàna i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana nandray mba handova izao tontolo izao, fa fahamarinana izay azo avy amin 'ny finoana. Raha toa ireo mifikitra amin'ny lalàna no mpandova, dia foana ny finoana dia ny votoaty sy ny fampanantenana faty maso eo amin'ny hery. Ny lalàna mahatonga fahatezerana. Saingy tsy misy lalàna, dia tsy misy fandikan-dalàna. "
Romana 4: 13-15 SFB98
Andininy faha-13, no nanamarinana an'i Abrahama Finoana no nino an'Andriamanitra ka dia olo-marina, ny lalàn 'ny mpankafy na dia tamin'ny andron'i Abrahama.
"Fa ny lalàna niditra koa ny raharaha dia ho be kokoa. Nefa teo amin'izay nihabiazan'ny ota nitombo, fahasoavana be kokoa "
Romans 5:20 SFB98
Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna, raha misy mampiasa azy araka ny tokony ho ary tonga saina fa tsy ho an'ny olo-marina, fa ho an'ny mpandika lalàna sy ny maditra, tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, fa tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ho an'ireo izay manisy ratsy ny rainy sy ny reniny fa mpamono olona sy ho an 'ireo manao fijangajangana sy ny firaisan'ny samy lehilahy, ny mpivarotra andevo, mpandainga, perjurers sy izay rehetra manohitra ny fampianarana tsy misy kilema - "
Timoty 1: 8-10 SFB98
Tsara ny lalàna, fa ny fanontaniana dia moa ve ianao mitantana ny nandavandavaka 613 ekipa rehetra, izany hoe amin'ny teny hafa, izay mitandrina ny lalàna, na oviana na oviana ny ota? Na ohatra, raha mitandrina ny Sabata na ny fahafolo, ary aza mihinana kisoa hena sy sns araka ny lalàna hoe:
Ary raha nandika ny iray amin'ireo 613, efa tapaka ny lalàna manontolo? Ary tsy manisa marina eo anatrehan'Andriamanitra, dia ianao no iray amin'ireo izay
handrarana sy maditra, ratsy fanahy sy ny mpanota mm,
"Fa izay miraikitra nitandrina ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Ny voasoratra hoe: "Voaozona izay ilay tsy mifikitra izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalàna boky ka hanaraka azy. '"
Galatianina 3:10 SFB98
"Tsy milaza fa olona efa nohamarinina tamin'ny finoana tsy ny asan'ny lalàna."
Romans 3:28 SFB98
"Inona no azontsika lazaina fa Abrahama razantsika efa nandresy ny asa? Raha nambara ho marina i Abrahama, noho izay nataony, dia misy hireharehany ny - nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny Soratra Masina? "Ary Abrahama nino an'Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany." Izay manao fotoana mba handray ny karama, fa tsy ny fahasoavana, fa toy ny zavatra izay efa nahazo. Fa ny tsy manan-miasa, tsy mino Izay manambara ny ratsy fanahy, dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. "
Romana 4: 1-5 SFB98
Ianao fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny maha tsy voafora, ianareo koa manana novelominy niaraka tamin'i Kristy. Efa voavela heloka antsika fandikan-dalàna rehetra sy niampita ny promissory fanamarihana sy ny fangatahana niampanga antsika. Efa nanaisotra azy tamin'ny nofantsihany tamin'ny hazo fijaliana. "
Kolosiana 2: 13-14 SFB98
Jesosy nanavotra anao avy amin'ny lalàna, ary ny fahotanareo nohomboany teo amin'ny hazo fijaliana sy ny karama ho azy ireo tamin'ny rany,
Fa ny fiainana ny lalàn'ny Fanahin'aina ao amin'i Kristy Jesosy no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Sarotra ho ny lalàna, osa tahaka ny tamin'ny alalan 'ny nofo, nampanaovin'Andriamanitra naniraka ny Zanany ho fanatitra noho ny ota, izay ivelany dia toy ny olo-meloka sy ny vatany nanameloka ny ota Andriamanitra. "
Romana 8: 2-3 SFB98
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, fa na iza na iza mino Azy dia tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay. "
John 3:16 SFB98
Jesoa fitiavana dia nipetraka teo ambanin'ny lalàna 100% amin'ny maha-olombelona satria fa tsy voatery hanao zavatra sy ho voavonjy amin'ny finoana sy ny fahasoavana.
"Nahoana ianareo no maka fanahy an'Andriamanitra, ary ny vozon'ny mpianatra ny zioga izay tsy razantsika na isika afaka ho entina?"
Asan'ny Apostoly 15:10 SFB98
Tsy misy nofo hohamarinina eo anatrehany ny fandinihana ny lalàna. Amin'ny alalan'ny lalàna dia ho mahatsapa ny amin'ny ota. "
Romans 3:20 SFB98
Raha ny lalàna niasa. Finoana, dia tsy ho ilaina.
"Koa" ny finoana, "mba ho araka ny fahasoavana, ary mampanantena ny mafy orina ho an'ny rehetra ny taranany, tsy ho an'ireo izay isan 'ny lalàna ny olona, ​​fa koa ho an' ireo izay manana ny finoan'i Abrahama, izay rain 'ny rehetra. "
Romans 4:16 SFB98
"Ny ota tsy hanan-kery aminareo; fa ianao tsy mba ambanin'ny lalàna, fa ambanin'ny fahasoavana."
Romans 6:14 SFB98
"Dia toy izany koa ianareo, ry rahalahy, noho ny tenan'i Kristy, dia efa natao maty ny amin'ny lalàna, dia ny mba isan 'ny iray hafa, dia Izay natsangana tamin'ny maty, mba hahavokarantsika ho an'Andriamanitra."
Romanina 7: 4 SFB98
Vakio ny Romanina 7 manontolo (zava-dehibe)
Ary hatramin'ny andron'i Jaona Mpanao-batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra iharan'ny herisetra ihany, sy izay hampahory herisetra izany. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'i Jaona, "
Matio 11: 12-13 SFB98
"Ny lalàna sy ny mpaminany dia nanana ny fotoana hatramin'i Jaona. Nanomboka tamin'izay, dia nitory ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona rehetra nampirisika ny hiditra. "
Lioka 16:16 SFB98
Fa tsy misy hafa na iza na iza no nandry fanorenana Can noho izay natao, i Jesosy Kristy. "
Kôrintianina 3:11 SFB98
Fa raha izany fanekena voalohany izany nanan-tsiny izany, dia mety mila toerana malalaka ho an'ny faharoa. "
Hebreo 8: 7 SFB98
Ny fanekena voalohany izany ny fifaneken'ny Lalàna.
Ny faharoa Association Ie mahazo tombontsoa.
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. "
Filipiana 1: 2 SFB98
Danielle Gabriel Facebook .
"Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana [i Jesosy], izay rehetra mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay." - 3:16
"Fa izay rehetra nandray Azy [Jesosy], dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany." - Jaona 1:12
"Fa raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa i Jesosy no Tompo sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao." - Rome 10: 9
Te-hovonjena sy hahazo famelan-keloka ny fahotanareo rehetra? Izao vavaka izao:
- Jesosy, aho mandray anareo ankehitriny sy manaiky Anao ho Tompo. Mino aho fa Andriamanitra efa nanangana anao tamin'ny maty. Misaotra Anao aho fa voavonjy aho izao. Misaotra anao fa ny namelanao ny helok'ity ahy, ary misaotra anao fa Izaho no efa zanak 'Andriamanitra. Amen.
Efa noraisinareo va i Jesosy rehefa nivavaka ambony?